Soo dejisan Kingo ROOT 1.5.6.3234 – Windows – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Kingo ROOT
Kingo xididka – software ah si aad u hesho helitaanka superuser on qalabka Android ah. software wuxuu taageeraa hindisooyin badan ka saarayaasha sare iyo versions kala duwan ee nidaamka hawlgalka Android. Kingo xididka tilmaamaysaa qalabka xiran oo si toos ah u rakibtay darawalka saxda ah ee model ah qaar ka mid ah qalab. darawalka aasaasay siiya user ku helaan in ay goobaha sare ee qalab, kartida si loo soo dajiyo codsiyada la helaan xaddidan iyo xuquuqda ay u maareeyaan nidaamka ama faylasha ku meel gaar ah. Kingo xididka uu leeyahay interface a fudud oo si sahlan ay u isticmaalaan.
bixinta xidid Automatic
Support for qalabka kala duwan ka soo saarayaasha kala duwan
Isku dhex leh versions kala duwan ee Android
Faallo ku saabsan Kingo ROOT
Kingo ROOT Xirfadaha la xiriira